माओवादीले कसरी लडेको थियो एक दशक ? - Jhilko
२०५२ साल फागुन १ गते जनयुद्ध प्रारम्भ भएको २३ वर्ष पूरा हुन एक हप्ता पनि बाँकी छैन । आजको पाँच दिनमा त्यो पुग्दैछ । झण्डै अढाई दशकमा पनि जनयुद्धले उठाएका मुद्धाको खासै सम्बोधन भएको छैन । संसारलाई हल्लाउने गरी भएको जनयुद्धबाट प्राप्त महत्वपूर्ण सुधारका परिणामलाई स्वीकार्ने तर त्यसका योद्धाहरुलाई अपराधी करार गरेर सिध्याउने गुरुयोजना बनिरहेको छ ।
यसैप्रति असन्तुस्टि व्यक्त गर्दै जनयुद्धका सर्वाेच्च कमाण्डर प्रचण्डले फेरि नयाँ ढंगले माओवादीले संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएका छन् । जनयुद्धको प्रारम्भ भएको मितिलाई स्मरण गर्दै त्यतिवेला भएका महत्वपूर्ण घटनाहरुको सामान्य झलक बु“दागत रुपमा यहा“ प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिएको छ ।
० फागुन १ – नेकपा (माओवादी)द्वारा ‘प्रतिक्रियावादी राज्यसत्तालाई ध्वंश गर्दै नया“ जनवादी सत्ताको स्थापना गर्न जनयुद्धको बाटोमा अघि बढौं !’ भन्ने मूल नाराका साथ जनयुद्धको शुरुवात । रोल्पाको होलेरी, रुकुमको आठविसकोट, सिन्धुलीको सिन्धुलीगढीमा रहेका चौकीहरु र गोरखाको च्याङलीमा रहेको कृषि विकास बैंक कब्जा ।
० फागुन ६– नेकपा (माओवादी)का महामन्त्री क.प्रचण्डद्वारा एक प्रेस वक्तव्य मार्फत् ती कार्वाहीहरुको जिम्मेवारी स्वीकार ।
० असार– माओवादीको केन्द्रीय समितिको बैठकद्वारा ‘योजनावद्ध ढंगले छापामार युद्धको विकास गरौं !’ भन्ने मूल नारासहित जनयुद्धको विकासको दोस्रो योजना शुरु ।
० असार– माओवादीको के.स.को बैठकले ‘छापामार युद्धलाई विकासको अर्को नया“ उ“चाइमा उठाऔं !’ भन्ने मूल नारासहितको तेस्रो योजना पारित ।
० माघ २२– धादिङको खहरेमा एम्वुस । दुई राइफल र वीस लाख रुपिया“ (नेपाल वैंक लिमिटेडको) कव्जा ।
० भदौ– नेकपा (माओवादी)को केन्द्रीय समितिको चौथो विस्तारित वैठक सम्पन्न । ‘आधार इलाका निर्माणको दिशामा अघि बढौं !’ भने मूल नारा तय ।
० भदौ २३– नेकपा (माओवादी) का वैकल्पिक पोलिटव्यूरो सदस्य सुरेश वाग्ले (क.वासु)को गोरखामा गिरफ्तारपछि हत्या ।
० चैत्र अन्त्य– गोरखाको हर्मी प्रहरी चौकी कव्जा ।
० असार १९– जाजरकोटको पा“चकटिया द¨ा इप्रका कब्जा ।
० भदौ ७– नवलपरासीको धवाडी इ.प्र.का. कव्जा ।
० भदौ १४– झापा महवारी इ.प्र.का. कव्जा ।
० फागुन – नेकपा (माओवादी)को दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन भव्य रुपमा सम्पन्न । प्रचण्डपथ पारित । अध्यक्षमा क.प्रचण्ड निर्वाचित । दक्षिण एसियाली फेडेरेशनको अवधारणा पारित । ‘आधार इलाका र स्थानीय सत्ता सुदृढ र विस्तार गरौं ! केन्द्रीय जनसरकार निर्माणको दिशामा अघि बढौं !!’ भन्ने मूल नारा तय ।
० जेठ ८– ओखलढु¨ाको खानीभञ्याङ इप्रका कब्जा ।
० मंसिर ६– अध्यक्ष क.प्रचण्डद्वारा पुरानो सत्ताले वार्ता र अग्रगामी राजनीतिक निकासको ढोका बन्द गरेको जनाउ“दै सचेत रहन जनसमुदायमा आग्रह ।
० मंसिर ८– जनमुक्ति सेना, नेपालको घोषणा, सर्वाेच्च कमाण्डर क.प्रचण्ड । सोही दिन संयुक्त क्रान्तिकारी जनपरिषद, नेपालको घोषणा । क.बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा ४१ सदस्यीय समिति सार्वजनिक ।
० मंसिर ११ – देउवा सरकारद्वारा संकटकालको घोषणा । शाही सेनाको औपचारिक परिचालन । शाही सुरक्षाकर्मीले जनादेश साप्ताहिक र जनदिशा दैनिकका कार्यालयमा रेड गरी ११ जना पत्रकार गिरºतार ।
० मंसिर २२– शाही सेना र प्रहरीको हत्या, गिरºतारी र राज्यआतंकविरुद्ध नेकपा (माओवादी)द्वारा नेपाल बन्द ।
० माघ १८ – क.बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा रामबहादुर थापा (बादल), कृष्णबहादुर महरा, देव गुरुङ र मातृका यादव रहनुभएको पा“च सदस्यीय माओवादी वार्ता टोली घोषणा ।
० साउन ३२– पुरानो सत्ता र नेकपा (माओवादी) बीच तेस्रो चरणको वार्ता दाङ हापुरेमा । सोही दिन रामेछापको दोरम्बामा शाही सेनाद्वारा जिल्ला जनसरकार प्रमुख बाबुराम तामाङसहित २० जना माओवादी कार्यकर्ता र एक स्थानीयको हत्या एवम् शाही सेनालाई ब्यारेकबाट पा“च कि.मि.भन्दा वाहिर ननिस्कन भएको सहमतिलाई तोडिएकाले वार्ता प्रभावित ।
० भाद्र १०– नेकपा (माओवादी)द्वारा युद्धविराम र वार्ता भ¨को घोषणा । देशव्यापी प्रतिरोध कार्वाही शुरु । काठमाडौंमा जनसेनाद्वारा शाही सेनाको कर्णेल किरण वस्नेतको सफाया ।
० कार्तिक २१– नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष क.प्रचण्डद्वारा एक विशेष सन्देशमार्फत् रेडियो जनगणतन्त्र नेपालको उद्घाटन ।
० चैत्र १३– नेकपा (माओवादी)का स्थायी समिति सदस्य तथा पूर्वी कमाण्ड इञ्चार्ज क.किरण भारतीय प्रहरीद्वारा सिलगुडीमा गिरºतार ।
० वैशाख ३१–माओवादी केस तथा मंगलसेन प्रथम व्रिगेडका कमाण्डर नेपबहादुर केसी (परिवर्तन)को आन्तरिक दुर्घटनामा शहादत ।
० असार ३— अखिल(क्रान्तिकारी)द्वारा शिक्षण हडतालसहित विविध सशक्त संघर्ष गरेर शाही सत्तास“ग संगठनमाथिको आतंककारीको आरोप फिर्ता गराउन सफल ।
० साउन÷भदौ– माओवादीको केन्द्रीय समितिद्वारा ‘प्रत्याक्रमणको पहिलो योजना सफल पारौं ! वैदेशिक हस्तक्षेपका विरुद्ध व्यापक तयारी गरौं !! भन्ने मूल नारासहितको प्रत्याक्रमणको योजना पारित ।
० माघ १९– ज्ञानेन्द्रद्वारा देउवा सरकार हटाएर आफ्नो अध्यक्षतामा सरकार गठन । शाही ‘कु’ विरुद्ध अध्यक्ष क.प्रचण्डको अपिल ।
० असोज १८ नेकपा (माओवादी)द्वारा एकपक्षीय युद्धविरामको घोषणा ।
० मंसिर १४– शाही सेनाद्वारा हेलिकोप्टरबाट गोली हानी डिभिजन कमाण्डर क.किमबहादुर थापा (सुनिल)को हत्या ।
० माघ २७– जनसेनाको पश्चिम सैन्य कमाण्डद्वारा रुपन्देहीको सुनवलमा शाही सेनाका पा“च ट्रक फोर्समाथि आक्रमण । २५ शाही सेनाको मृत्यु । भारी मात्रामा हतियार कब्जा । 
नचाहदा नचाहदै द्वन्द्व हुनसक्छः प्रचण्ड
नवऔपनिवेशिक सँस्कृति र आर्थिक सम्बन्ध
नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले उपलब्ध गराएकोे बिहान ९ः०५ बजेको शुभसाइतमा राष्ट्रपति...
चीन अमेरिकासँग सिक्सजीका लागि भिडदै
जनउपयोगी विधेयक ल्याइएको छ : उपप्रधानमन्त्री पोखरेल
उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई जनउपयोगी र...